mpanjifa - Feinade elektrika Appliance Co., Ltd
Zhuhai Pinot mpiara teknolojia. LTD
Foana aho namana niaraka taminy nandritra ny taona maro, ary ny antony dia matoky aho mba hiara-miasa aminy dia satria mino aho fa izy no za-draharaha, mahalala fomba sy manetry tena mpitarika izay mitandrina haingana amin'ny The Times. Izany dia midika hoe efa-dalam-pandrosoana. Mino aho fa teo ambany fitarihan'i tsara ny mpitarika, miaraka amin'ny toy izany andianà vokatra amin'ny tsara laza, dia azo antoka fa feynard handeha haingana kokoa sy ela kokoa. Ary koa mino intsony fa velona ny mpanjaka ny amin'ny sitrapony.
Zhuhai Pinot teknolojia mpiara., LTD. - talen'ny atsimo Sina - ren Guoqiang
Zhuhai pinuo teknolojia mpiara., LTD. Dia orinasa izay mitantana ny herin'ny herinaratra rafitr'ity tontolo ity tranom-panjakana. Izany dia fototry ny fikarohana siantifika 20.000 metatra toradroa. Manana R & D foibe in-teknolojia avo zhuhai faritra sy Shenzhen nanshan siansa sy ny teknolojia zaridaina, dia sampan any Beijing, Shanghai sy Shenzhen, ary mihoatra ny 20 birao ao Shina. Dimy injeniera sy ny fampiharana ara-teknika fanompoana foibe no napetraka tao avaratr'i Shina, atsinanan'i Shina, atsimon'i Shina, avaratra andrefan'i Shina sy atsimoandrefan'i Shina, ary tonga lafatra sy matotra ara-barotra sy ny injeniera fampiharana Network efa niorina
Ningbo aimei-dongxiong orinasa mpamokatra entana, mpiara. LTD
Araka ny fantatry ny rehetra, ny fitadiavana fiarovana maotera eo amin'ny orinasa dia somary tanjona. Mila mitady ny mahasoa mpamatsy ka hanao ny vokatra sy ny fitaovana manana marika tsara vokany. Ihany Win - fandresena afaka fiaraha-miasa ny orinasa fifandraisana ela! Maniry koa aho hitanao tsara mpamatsy, mpiara-miasa tsara!
Ningbo aimei-dongxiong orinasa mpamokatra entana mpiara., LTD. - mpitari-draharaha ao amin'ny birao - Huang Guo-Sheng - manokana amin'ny famolavolana sy ny orinasa mpamokatra entana avo avo matetika matetika matetika avo-milina
Ningbo aimei-dongxiong orinasa mpamokatra entana mpiara., LTD. Dia matihanina mpanamboatra ny "dongxiong marika" matetika avo plastika welding milina, ultrasonic plastika welding milina sady niteti milina. Afaka ampanjifaina automatique fitaovana sy ny tsy faneva fitaovana milina araka ny mpanjifa ny fepetra.
China huayi mpiara mandatsa-dranomaso. LTD
Ny orinasa dia voatanisa ao Febroary 2007, nandrakotra ny tsena-panjakana Grid, dimy vondrona taranaka hery, solika, orinasa simika, lalamby, orinasa sy ny orinasa mpamokatra entana dingana. Ao anatin'ny roa na telo taona, feinald nanjary mpiara-miasa manan-danja izay namanay. Ny fahatsapana ny feynard dia ny mpivarotra mahari-po, ny lahateny ara-potoana dia, ary fanohanana ara-teknika ny matihanina. Izany dia tahaka ny fototra feynard fahaizana; fa momba ny asa fanompoana. Mino aho fa afaka ny ho tsara kokoa izy ireo amin'ny zavatra rehetra, ary dia mendrika feynard mpiara-miasa.
Zheng xiaohua, talen'ny Shina huayi mpiara mandatsa-dranomaso., LTD
Huayi entona mpiara., LTD. (Izay voambara antsoina hoe "huayi entona") dia fototry mitana ny huayi herinaratra fanampiny vondrona mpiara., LTD. in leqing tanàna, tanàna Wenzhou, Zhejiang faritanin'i. Ankatoavin'ny ny Fiarovana fitsipika asa Shina (CSRC) no.  no. 286, dia indray voalaza ao amin'ny Shanghai tahiry fifanakalozana tamin'ny 1 Febroary 2007 amin'ny tahiry fitsipi-600290
Danfoss mandeha ho azy fanaraha-maso ny fitantanana (Shanghai) mpiara. LTD
Ny orinasa dia nanao raharaham-refrigeration sy ny fanaraha-maso vahaolana famerana mari-pana. Avy amin'ny fomba fijery ny raharaham-barotra, isika ihany koa ny mpamatsy. Ny asa fitoriana dia ny manao ny ezaka rehetra mba hanatsarana tsara kalitao sy ny vidiny mirary ny vokatra sy ny tolotra mba mpanjifa mifaninana kokoa. Ary feynard dia mifanaraka amin 'ny filozofia. Indrindra indrindra ny orinasa mampiasa ny maotera ny 18.5kw-110kw, sy ny varotra sy ny ekipa ara-teknika ny feinade matetika no mamangy ny orinasa, ka ny sasany amintsika ny fifandraisana ara-teknika, hanampy antsika hamaha olana sasany fitaovana miaraka, ary manome soso-kevitra kely. Ny tena tsara dia tsy vitan'ny mivarotra mpamatsy vokatra, fa te-mpanjifa, mieritreritra ny zavatra mpanjifa te mitsangana ao amin'izay mpanjifa ny toerana ny mandinika ny olana!
Danfoss mandeha ho azy fanaraha-maso ny fitantanana (Shanghai) mpiara. LTD. - sunbin
Danfoss (Danfoss) dia iray amin'ireo orinasa iraisam-pirenena lehibe indrindra any Danemark orinasa orinasa mpamokatra entana, naorina tamin'ny 1933. Danfoss dia fantatra amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana ny teknolojia sy ny orinasa mpamokatra entana nandroso mifantoka amin'ny angovo fiarovana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Danfoss izao tontolo izao dia mitarika mpanamboatra sy ny tolotra ny refrigeration fanaraha-maso sy ny famerana mari-pana, fanafanana sy ny fanaraha-maso ny rano, ary ny fanaraha-maso ny fampitana.